सरकार 'स्थिर' छ - परिहास - नेपाल
आज आज, भोलि भोलि भन्दाभन्दै दुई तिहाइको सरकारले एक वर्ष पनि पार गरेछ । सरकारले वर्ष दिन पूरा गर्नु पनि राम्रै कुरा हो । अझ म त भन्छु, एक वर्ष पूरा टिक्नु नै यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । योभन्दा अघि कुनै पनि सरकार पूरा वर्ष टिकेको थिएनन् । कोही नौ महिनामा गए, कोही आठै महिनामा । योचाहिँ एक वर्ष टिक्यो । यत्रो वर्षपछि बल्लबल्ल एउटा सरकार आएको छ, जो एक वर्ष टिक्यो । के यो सानो कुरा हो ?
केही पूर्वाग्रही मानिस छन्, जो प्रश्न उठाइरहेका छन्- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनावमा दुई तिहाइ पाएर जनतालाई के दिए ?
म भन्छु- स्थिर सरकार दिए । जनतालाई चाहिएको स्थिर सरकार हो, त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका छन् । देशमा आएका सरकार अस्थिर भएकाले जनता वाक्क हुँदै थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो वाक्क ब्रेक गरिदिए । र, स्थिर सरकार ल्याइदिए ।
अहिले देशमा जो सरकार छ, त्यो पूरै स्थिर छ । तपाईंले जति चलाए पनि यो दायाँ-बायाँ चल्दैन । टसको मस पनि हुँदैन । तपाईं गाली गर्नुस्, आलोचना गर्नुस्, हकार्नुस्, डाँट्नुस् । तर अहँ, यो सरकार यताको उता हुँदैन । पूरै स्थिर छ ।
नेपाली जनतालाई यस्तै 'स्थिर' सरकार चाहिएको होइन ?